भारतीय नाकाबन्दीको स्मरण गर्दै प्रदर्शनः महाकाली त लियौ, अरुण तेस्रो दिदैनौं !
भारतले नेपाल माथि लगाएको नाकाबन्दीको स्मरण स्वरुप नेपालगन्जमा शनिबार प्रदर्शन गरिएको छ । स्थानीय धम्बोझी चोकमा स्वतन्त्र नागरिक समाजको अगुवाईमा विवेकशील साझा र नयाँ शक्ति पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले बिरोध आयोजना गरेका थिए ।
सहभागीले नेपाली र हिन्दी भाषामा लेखिएका ‘मोदी जी स्वागत छ, तर नाकाबन्दी बिर्सेका छैनौं’, ‘महाकाली त लियौ, अरुण तेस्रो दिदैनौं’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए । प्रतिपक्षमा रहँदा आफूलाई राष्ट्रवादी बताउने केपी शर्मा ओलीले अहिले राष्ट्रघाती काम गरेको प्रदर्शनमा सहभागीको आरोप छ । मोदीको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनकपुर र काठमाडौंको चाबी हस्तान्तरण गरेर राष्ट्रघाती काम गरेको भन्दै आपत्ती जनाए ।
प्रदर्शनकारीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा भारतीय सञ्चार माध्यमले मुक्तिनाथ मन्दिरको निषेधित क्षेत्रमा फोटो खिच्ने र प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । नेपालका सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गरेर भारतीय सञ्चार माध्यमलाई मोदीको कार्यक्रममा प्रवेश गर्न दिइएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरिएको छ । कोणसभामा विवेकशिल साझा पार्टीका डा. विनोद कर्ण, नयाँशक्ति पार्टीका युवा नेता टंकप्रसाद धमला लगायतले बोलेका थिए।
३० बैशाख २०७५, आईतवार ०६:०७
Prevमोदीले भूकम्प दोहोर्‍याएर सम्झिए तर सम्झिएनन् नाकाबन्दी !
यसरी रोकियो बालविवाहः प्रहरी पुगेपछि मण्डपबाटै भागे बेहुला-बेहुली !Next